के हो चीनमा भेटिएको ब्यूबनिक प्लेग रोग ? – Sourya Online
एजेन्सी २०७७ असार २४ गते ९:०० मा प्रकाशित
चिनियाँ स्वास्थ्य अधिकारीहरूले ब्यूबनिक प्लेगको शंका गरेको एउटा बिरामी भेटेको बताएका छन्। ती व्यक्ति कसरी संक्रमित भए थाहा हुन सकेको छैन तर चीनमा थप संक्रमण हुन सक्ने भन्दै उच्च सर्तकता अपनाइएको छ।
मुसा र त्यसका परजीवीमा पाइने येर्सिनिया पेस्टिस ९थ्भचकष्लष्ब उभकतष्क०नामक सूक्ष्मजीवका कारण प्लेग लाग्छ। यो एउटा घातक संक्रामक रोग हो। ब्यूबनिक प्लेग सबैभन्दा सजिलै मानिसमा लाग्ने प्लेग हो। यो रोग लागेपछि काखी र तिघ्राको बीचमा दुख्ने सुन्निएको डल्लो देखिन्छ। सन् २०१० देखि २०१५ सम्म विश्वभरि यसका ३,२४८ बिरामी भेटिएकोमा ५८४ जनाको मृत्यु भएको थियो।
पहिले यसलाई अंग्रेजीमा ‘ब्ल्याक डेथ’ अर्थात् ‘कालो काल’ पनि भनिथ्यो। किनभने यो रोग लागेका मानिसहरूको हात र खुट्टाको औँलाहरू कालो भएर काम नलाग्ने हुँदै जान्छन्।
ब्याक्टेरिया संक्रमण भएको दुईदेखि छ दिनमा मानिस बिरामी पर्छ। प्लेग भएका व्यक्तिको लिम्फ नोडबाट संकलित नमुना सूक्ष्मदर्शक यन्त्रबाट यस्तो देखिन्छ । कुखुराको अण्डा जत्रोसम्मको सुन्निएको मासुबाहेक ज्वरो, टाउको दुख्ने, जीउ दुख्ने र थकान यसका लक्षण हुन्।
कसरी सर्छ रोग ?
घरपालुवा कुकुर र बिरालोहरू पनि उपियाँको टोकाइ वा संक्रमित मुसा खाँदा संक्रमण हुने सम्भावना हुन्छ। संक्रमित जनावरको रगतका रहेको ब्याक्टेरिया मानिसको घाउमार्फत् पनि रगतमा प्रवेश गर्न सक्छ।
चीनमा अहिले संक्रमण हुन सक्ने जनावर मार्न र खान प्रतिबन्ध लगाइएको छ। प्लेगका कारण मृत्यु भएका मानिसको शवनजिकै जाने व्यक्तिहरूलाई पनि यो सर्न सक्छ। संक्रमण भएपछि जतिसक्दो छिटो एन्टीबायोटिकमार्फत् उपचार गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। बिनाउपचार यो रोग घातक हुन्छ। रगत वा शरीरका अन्य नमुना लिएर गरिने परीक्षणले ज्यान जोगाउँछ।
प्लेग अझै पनि संसारका थुप्रै स्थानमा छ । हालैका वर्षमा कङ्गो र म्याडाग्यास्करमा यो फैलिएको थियो। साउथह्याम्पटन विश्वविद्यालयसँग आबद्ध सूक्ष्मजीववैज्ञानिक डा. म्याथ्यू ड्राईडन भन्छन्, ‘सुरुमै चरणमा ती संक्रमण थाहा भएका कारण एक्ल्याएर उपचार गर्न र संक्रमण रोक्न सहज भयो।’
ब्यूबनिक प्लेग ब्याक्टेरियाले हुने भएकोले एन्टीबायोटिकले सहजै उपचार गर्न सकिन्छ। त्यसैले चीनमा एकजनामा संक्रमण भेटिनु जोखिम सुनिए पनि अहिलेलाई त्यो सहजै उपचार हुनेगरी एक जनामा मात्रै देखिएको छ। (बीबीसी)